Dhaxalka Dhaqanka ee Maldives wuxuu ku qayliyaa Qaabka Rally InternationalYacht
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dhaxalka Dhaqanka ee Maldives wuxuu ku qayliyaa Qaabka Rally InternationalYacht
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Maldives • Shirarka • Dadka • Dib-u-dhiska • Wararka Sao Tome iyo Principe • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan • Wtn
Maareeyaha MITDC, Maxamed Raaidh
'Savaadheeththa Dhathuru' waa dhacdo shiraac ah oo ay soo qabanqaabisay Maldives Integrated Tourism Corporation (MITDC) oo ku martiqaadeysa badmaaxiin ka kala yimid daafaha dunida si ay uga qeyb galaan socdaalka badda Maldives, joogsashada jasiiradaha maxalliga ah, sahaminta dhaxalka, la kulmidda goobo quusitaan caan ah, banka ciidda iwm. Socdaalku wuxuu bilaabmayaa Febraayo 2022 -ka oo ka bilaaban doona atoll -ka waqooyi ee dalka, Haa Alif Atoll, isagoo qaadanaya koorso 3 toddobaad ah si uu u gaaro Baa Atoll. Waxaa loogu talagalay inay booqato guud ahaan 11 jasiiradood oo la deggan yahay.
Ujeedada qabanqaabiyaasha Rally International Yacht Rally ayaa ah in la hormariyo dhaqanka & dhaxalka Maldivian, taariikhdeeda hodanka ah iyo sidoo kale dalxiiska doonyaha iyo in laga faa'iidaysto faa'iidooyinka xoojinta aagaggaan gudaheeda warshadaha dalxiiska ee dalka.
MITDC waxay iftiiminaysaa dhacdadan iyada oo lagu maamuusayo mid ka mid ah Boqorradii ugu waaweynaa ee xukumi jiray jasiiradda yar, As-Sultan al-Gaazee Muhammad Thakurufaanu al-Auzam (Bodu Thakurufaanu).
Tani waxay noqon doontaa safar gaar ah iyada oo loo marayo taariikhda Maldivian, oo muujineysa xusuusta loogu talagalay Sultan Muhammed Thakurufaanu, iyo booqashada goobaha taariikhiga ah ee la xiriira dadaalkiisa.
Xafladda daahfurka Savaadheeththa Dhathuru International Yacht Rally 2022 ayaa maanta lagu qabtay Isniintii, 23 -ka Ogosto 2021 Madxafka Qaranka.
Furitaankii furitaanka Agaasimaha Maareeyaha Maxamed Raaidh ayaa iftiimiyay muhiimadda ay leedahay in la keeno kala-duwanaanshaha Warshadaha Dalxiiska Maldives waxayna ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado Dalxiiska Bulshada ku salaysan ee jasiiradaha maxalliga ah.
Wuxuu kaloo soo qaatay khudbaddii Madaxweyne Ibrahim Maxamed Solih ee sannad -guuradii 100 -aad ee Muleeaage bishii Diseembar 2019, taas oo ku baaqday in la hirgeliyo Dalxiiska Dhaxalka iyo ahmiyaddiisa Maldives.
Boggan xuska mudan 2 of 2 khudbaddu waxay ahayd dhiirri -gelinta MITDC koox si ay u abaabulaan isu soo baxii doonyaha ee Savaadheeththa Dhathuru.
Savaadheeththa Dhathuru Yacht Rally waxaa si rasmi ah u daahfuray marti sharafta, Mr. Salah Shihab, Agaasimaha Maareeyaha iyo Aasaasaha Voyages Maldives iyo Seagull Group.
Khudbadiisa, Mudane Saalax wuxuu diirada saaray inuu ka hadlo muhiimada dalxiiska safari ee jasiiradaha sida Maldives wuxuuna yiri tani waa habka ugu wanaagsan ee lagu sahamin karo Maldives -ka dhabta ah.
Waxa kale oo uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay qaban -qaabada Rach International Yacht Rally, maadaama uu rumeysan yahay in isu -soo -bax noocan oo kale ah uu soo jiidan doono soo -dhoweyn badan qaybta dhaqanka ee Warshadaha Dalxiiska ee dalka.
Munaasabadda ayaa sidoo kale ka koobnayd khudbad ka soo jeedisay Musheer -ka Wasaaradda Hidaha, Nishaan Izzudheen ge Izzathuge Veriya Mudane Cabaas Ibraahim oo ka hadlay soo dhaweynta ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dhaxalka ummadda, wuxuuna mahadcelin u jeediyay cid kasta oo ku howlan abaabulka munaasabaddan oo kale. .
Heesta mowduuca rasmiga ah ee isu -soo -baxa ayaa sidoo kale waxaa munaasabaddan ka sii daayay Maareeyaha MMPRC, Mudane Thoyyib Maxamed. Khudbadiisa wuxuu ugu xaqiijiyay MITDC iskaashi aad u weyn MMPRC xagga isu soo baxan, isagoo sii iftiimiyay muhiimadda ay leedahay in la bilaabo dhacdadan oo kale.
Xafladda waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Dhaqaalaha Uz. Fayyaz Ismaaciil, Wasiirka Difaaca Uz. Mariya Diidi, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, saraakiil ka tirsan dowladda, iyo madaxda kala duwan ee qaar ka mid ah ururada ugu sarreeya dalka.
Bilowga Rasmiga ah, ka-qaybgalka isu-soo-baxii doonnida ee Savaadheeththa Dhathuru ayaa hadda u furan badmaaxiinta ka kala yimid daafaha dunida si ay uga qaybgalaan isu soo baxii ugu horreeyey abid ee ka dhaca jasiiradaha Maldives. Bogga rasmiga ah ee isu -soo -baxan doontu waa www.maldivesyachtrally.com
Shirkadda Horumarinta Dalxiiska ee Maldives Integrated Tourism (MITDC) waa 100% Dowladda Maldivian SOE oo loo xilsaaray inay taageerto oo kobciso horumarka iyo kobaca qaybta badhtamaha suuqa ee Warshadaha Dalxiiska. Ujeeddadeeda ugu weyni waa in ay ummadda u keento koboc dhaqaale iyada oo la ballaarinayo waddooyinka suurtagalka ah ee waaxda dalxiiska iyada oo loo marayo horumarinta nidaamsan oo qorshaysan ee dalxiiska isku dhafan ee warshadan. MTDC waa xubin ka mid ah Shabakada Dalxiiska Adduunka.